Hafatry ny Eveka – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Ny Teny tonga Nofo, Nofo tonga Mofo, Mofo zary Aina
Tag: Hafatry ny Eveka
Hafatry ny FEM : « Ho aminareo anie ny Fiadanana »
De Admin dans la catégorie Vaovao
Ry vahoaka malagasy tsivakivolo, Ry kristianina havana, “Ho aminareo anie ny Fiadanana!” (Jo 20, 19) Io Tenin’i Jesoa Kristy tafatsangan-ko velona, niseho tamin’ny mpianatra nihidy tao an-trano noho ny tahotra io, no entinay hiarahabana anareo sy hitsidihanay ny tokantranonareo tsirairay amin’izao fotoan-pitsapàna lalovantsika, mbola miady amin’ny ny valan’aretina Covid_19 izao. Noho ny toe-java-misy iaraha-mahalala dia …
Hafatry ny Eveka
Hafatry ny FEM : atomboka ny 19 martsa ny vavaka hasivianandro
Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanan’ny Tompo Ry havana, Efa manodidina an’i Madagasikara ny areti-mifindra Coronavirus (Covid 19) ankehitriny. Miantso antsika rehetra hiombom-bavaka amin’ny Papa François ho an’ireo firenena tratran’izany. I Jesoa Kristy Tompo nibaby ny rofintsika rehetra ka nandresy ny ratsy tamin’izy nitsangan-ko velona anie, hanome hery ireo marary sy ireo mpitsabo, ary ny fianakaviany. …
Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara – novambra 2019
“Nino izy, fa nanantena na dia tsy nisy tokony hanantenany aza” (Romana 4, 18) Ho an’ny Kristianina rehetra sy ireo izay tsara sitra-po Homba anareo anie ny Fiadanana ! Isaorana Andriamanitra Trinite Masina satria tontosa soa aman-tsara iny famangiana apôstôlika nataon’ny Papa Fransoà teto amintsika iny amin’ny maha Ray aman-dreny iombonana azy; ary hafaliana …
Hira faneva fandraisana an’i Papa Fransoa
De Admin dans la catégorie Vavaka
Mpamafy fiadanana sy fanantenana 1- Iraky ny Ray, sady Apôstôlin’i Jesoa, Dimbin’i Piera, Ianao ry Ray Masinay ô Vatolampy iorenan’ny Eglizy eto an-tany Mpitana ny fanalahidin’ny lanitra Nirahina hitory eran’ny vazan-tany Hampiray ny andian’ondrin’i Jesoa Hankahery ireo rahalahy sy anabavy Hiorina amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy Ray Masina François ô! Faly izahay mandray anao …
Hafatry ny Eveka, vavaka
Vavaka fiomanana amin’ny famangiana apostolika ataon’ny Papa Ray Masina Fransoa
Ry Andriamanitra Rainay ô,misaotra Anao izahay fa tsy mitsahatra maneho ny famindramponao Ianao. Naniraka an’i Jesoa Zanakao Ianao nitory ny Evanjely ka namonjy sy nanavotra anay hiala amin’ny gejan’ny fahotana mamatotra sy mampahory anay. Niantso sy naniraka mpianatra Izy. Tianao hanenika ny isan-tokatrano ny hafaliana entin’izany Evanjely izany. Nahazo tombony tamin’izany ity tanindrazanay ity tamin’ny …
Fanentanana avy amin’ny Fivondronamben’ny Eveka momba ny famangian’i Papa Fransoa an’i Madagasikara
« Hataoko ao anatinareo ny Fanahiko…. Honina eo amin’ny tany nomeko ny razanareo ianareo, dia ho vahoakako ianareo, ary izaho ho Andriamanitrareo” (Ez 36, 27-28) Homba antsika mianakavy anie ny fiadanana! Misaotra an’Andriamanitra isika fa tanteraka ny faniriantsika sy ny an’ny Papa Fransoa, hamangy an’i Madagasikara ny 6 -10 septambra 2019, ho avy izao. Fitia mifamaly …
Hafatry ny birao maharitry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara
Ry Malagasy mpiray tanindrazana, Amin’izao fotoana ankatoky ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izao, izay trangan-javatra lehibe iankinanan’ny ho avy sy ny fiainan’ny firenena amin’ny dimy taona manaraka, dia raisinay mpikambana ato amin’ny Birao maharitra ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara ho adidy ny manao antso avo ho fanamafisana ihany koa ny hafatra efa …
Iza moa i Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor Solo ?
« Ampy ho anao ny fahasoavako » 2Kor12.9 Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo amin’ny faha-58 taonany i Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga. Ny 11 aprily 2010 izy no napetraka tamin’ny Fiketrahana masina maha piandry ondrin’ny diosezy azy. Andraikitra nosahaniny teo anivon’ny Fivondronamben’ny Eveka ihany koa ny Justice et paix sy ny Aumônerie Catholique des …
JMJ Mada IX : Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka
De Admin dans la catégorie Hafatra
Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara Famaranana ny JMJ Mada 9 Mahajanga Ry tanora malala, Misaotra an’Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina isika, izay niara-dàlana tamintsika ka nahatontosa soa aman-tsara izao JMJ Mada-9, niarahantsika nankalaza teto Mahajanga, nandritra ny herinandro izao ary niarahantsika nandalina ny lohahevitra hoe : « Aza matahotra ry Maria, fa …
Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka – mey 2018
« Ny taranakao hanorina indray ny rava ela … … … hahatonga ny tany ho azo honenana » (Izaia 58, 12) Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika. Ho antsika Kristianina sy izay tsara sitra-po rehetra. Nangetaheta fihavaozana sy fanavaozana ny firenentsika, fa toa manjaka loatra ny fitiavam-bola arahin’ny tsy …
LOHATAONAN’NY FAHARIANA 2020 : Mandray anjara mavitrika isika !
LOHATAONAN’NY FAHARIANA 2020 – Vavaka iombonana amin’ny Papa François
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – septambra 2020
AFAFI – FET : ndao hivory isaky ny alahady tolakandro ao amin’ny FB !
© 2020 Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA.